खनिए सरकारविरुद्ध डा.बाबुराम, गोविन्द केसीको पक्षमा | Biswas News
खनिए सरकारविरुद्ध डा.बाबुराम, गोविन्द केसीको पक्षमा
काठमाडौं– नयाँ शक्तिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार लोकतन्त्र र समाजवादको सिद्धान्त र नीति विपरितका क्रियाकलाप गर्न उद्धत भएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा समय मागेर बोल्दै पुर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले उपत्यकाका सार्वजनिक स्थलहरुमा सभा गर्न नपाउने निर्णय गरेर सरकारले लोकतन्त्र,समाजवाद र साम्यवादको सिद्धान्त र नीति विपरित अघि बढेको बताए । केही समय यता देखा परेका घटनाहरु लोकतन्त्र र समाजवादको सिद्धान्तले परिकल्पना गरेका नीति तर्फ उन्मुख नभएको भन्दै उनले चिन्ताका व्यक्त गरे ।
यो निर्णयले लोकतन्त्रको सामान्य मुल्य मान्यतालाई कुण्ठित गर्ने काम गरेको भन्दै त्यो मान्य नहुने चेतावनी दिए । उनले भने, “यो सरकारले माक्र्सवादको कुन चाही धारलाई पक्षपोषण गर्छ ?स्पष्ट पारियोस् ।”
सबैले मिलेर बनाएको संविधानको प्रस्तावनामा नै उल्लेख लोकतन्त्रमा आधारित समाजवाद उन्मुख प्रणाली भनेकाले समाजवाद र लोकतन्त्रलाई अपनाउने नीति सरकारले लिनुपर्ने तर्क उनले गरे ।
यसैबीच समाजिक सञ्जालमा पनि डा. भट्टराईले सरकारले मेडिकल क्षेत्रको वर्तमान विकृति हटाउनुको साटो अझैं थप्ने गरी चिकित्सा शिक्षा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन लागेको भन्दै आलोचना समेत गरेका छन् ।
उनले चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई फिर्ता लिई डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्दै जीवन रक्षाको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्र मुनाफाका नभई सेवामुखि हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टराईले वर्तमान सरकारले यसलाई नजरअन्दाज गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘स्वास्थ्य–शिक्षा मुनाफाका क्षेत्र हैनन् र बनाउनु हुँदैन । यो मार्क्सवाद र समाजवादको कखरा हो । यसलाई नबुझ्ने र बुझपचाउनेहरूले आफुलाई कम्युनिष्ट भन्नु कस्तो विडम्वना हो ? भट्टराईले प्रश्न गरेका छन् ।
उनले दुई तिहाई बहुमतको सरकारले विद्यमान विकृति हटाउनु सट्टा अझै थप्नेगरी विधेयक ल्याउनु लाजमर्दो भएको पनि बताएका छन् ।
Previous articleयातायात व्यवस्था कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई दुःख दिने ८ जना बिचौलिया पक्राउ
Next articleनयाँ बन्दै गरेको ग्रहको पहिलो प्रमाणित तस्वीर सार्वजनिक